Akụkọ ihe mere eme nke Us-Hebei Shuangxing Seeds Co., Ltd.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Hebei Shuangxing Seeds Co., Ltd.
Hebei Shuangxing Mkpụrụ Co., Ltd. tọrọ ntọala na 1984, na onye bu ya ụzọ bụ Shijiazhuang Shuangxing Watermelon Research Institute.Ọ bụ nke mbụ onwe ozuzu specialized technology enterprise na-ike na nkà mmụta sayensị nnyocha, mmepụta, ahịa na ọrụ na Hebei Province.Ọ bụ kredit Enterprise na AA ọkwa na mkpụrụ ụlọ ọrụ nke China, a kredit Enterprise na AAA ọkwa na mkpụrụ ụlọ ọrụ nke Hebei Province, ụlọ ọrụ na elu technology na ụlọ ọrụ na ama ụghalaahịa na Shijiazhuang City na ọbụna na Hebei Province.Ọ bụ ngalaba na-achị achị nke China Mkpụrụ Association, osote onye isi oche nke Hebei Province Mkpụrụ Association, Shijiazhuang International Sayensị na Nkà na ụzụ imekọ ihe ọnụ Base na Hebei Province Youth Science and Technology Innovation Action Demonstration Base.Ụlọ ọrụ ahụ nwere otu R & D nke ya na usoro R&D zuru oke.O nwekwara ntọala ọkwa mba ụwa nke mmepụta na nnwale na ha na-agbasa na Hainan, Xinjiang, Gansu na ọtụtụ ebe ndị ọzọ nke China, nke na-atọ ntọala siri ike maka ịmụ nwa.
Na-edu mba mkpụrụ ụlọ ọrụ, na-kasị ntụkwasị obi mkpụrụ suppliers nke ndị ọrụ ugbo, n'ikpeazụ ghọọ aa nnukwu multinational enterprise na elu azụmahịa nlereanya, R & D na iche nke elu-edu ugbo ngwaahịa.
A raara onwe ya nye na nkwado ngwaahịa na ọrụ dị elu, nke na-eme ka ndị na-arụ ọrụ (ndị ahịa) na-eme nke ọma, na-eme ka ndị na-emepụta ihe na-emewanyewanye nke ọma na ime ka ndị na-azụ ahịa dịkwuo mma.
Iguzosi ike n'ezi ihe, izi ezi, arụmọrụ na ihe ọhụrụ.
Ụlọ ọrụ ahụ emeela usoro dị ukwuu nke mgbasa ozi na ngwa ngwa na nyocha sayensị banyere anyụ, muskmelon na sunflower ozuzu, karịsịa anyụ na muskmelon dị iche iche. N'ime afọ iri atọ na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ arụpụtala ụdị 120 ọhụrụ nke melon, ụdị 20 dị ụtọ. .Ụfọdụ n'ime ha nwetara Asambodo Mmeri Sayensị na Nkà na Ụzụ nke Hebei na Nrite Ọganihu Sayensị na Nkà na Ụzụ Obodo.